maamulka Korean heli lahayn falal aan sharci ahayn in baaritaan Bithumb
Baaritaanka galay sarrifka ugu weyn ee South Korea, Bithumb masuuliyiinta kala duwan South Korean ayaa shaaca ka qaaday in aanay jirin Daalimiinta ku hadlaya magaca shirkadda, inkastoo biilka canshuurta waaweyn.
Bithumb hadda leedahay Biilka cashuurta of a 30 bilyan oo ku guuleystay in ay bixiyaan, taas oo ka dhigan tahay in qiyaas ahaan $28 million.
Biilka cashuurta weyn ma aha mid aad la yaab leh, sida madal soo eedeeyo ajuurada celceliska 0.3% on qiyaas ahaan $250 milyan oo xawaalad maalin kasta.
Haddii Bithumb this badan ku saabsan eedeeyo, in ka dhigan tahay in shirkadda ka dhigaysa tirada soo qabatay ee qallafsan $750,000 maalin kasta, taas oo ka dhigan tahay in ku dhawaad $274 million sanadkiiba.
Tags: Seeraar, news
Ontology bilowday deegaanka xawaaraha - Ontology Olympus xawaaraha OOA
Ontology, a new high-performance public multi-chain project and a distributed trust collaboration platform, ku dhawaaqay Ontology Olympus xawaaraha (OOA).
Barnaamijku wuxuu ugu yeedhi khubarada farsamada iyo wax soo saarka guud beeraha in ay iska kaashadaan in ganacsiga iyo in la dhiso codsiyada ganacsiga qaybiyey cusub oo ku salaysan Ontology ee jiilka soo socda kaabayaasha silsilad dadweynaha si ay u dhisaan ah-il furan, maskax furan, iyo iskaashi ecosystem trust qaybiyey.
Barnaamijka Ontology Olympus xawaaraha ku siin doonaa dhamaystiran farsamo, marketing, maalgelinta, talanti, iyo taageero waafaqsan sharciga ah. Ontology Foundation waa inay maalgashi ku dhowaad 1.5 billion USD worth of tokens, kuwaas oo dhammaantood waxaa loo isticmaali doonaa si ay u taageeraan horumarinta mustaqbalka ee GOORMUU jira iyo kooxaha la doortay.
Norwegian CEO Air si loo bilaabo sarrifka crypto
Air CEO Maalqabeen Norwegian Bjørn Kjos waxaa bilaabay sarrifka cryptocurrency la odhan jiray Norwegian Block Exchange, iyo qoraal la xiriira Norwegian Air haatan aqbalay cryptocurrency sida bixinta.
horaantii, shirkadda NBX Exchange, ayaa soo sara kiciyey $250,000 in lacag ururinta wareega a.
CEO The ayaa sheegay "Waxaan eegaya wax ay fududdahay in la qaaddo… isagoo cryptocurrency sida xulashada bixinta ee Airlines, Waxaan u aragnaa in ay jirto baahi loo qabo suuqa halis ah, halkaas oo aad ka iibsan kartaa oo iibin cryptocurrencies. "
NBX uu leeyahay qorshe han gool ee siidaba is dhaafsi sida GDAX iyo Kraken
Report Kraken Daily Market for 08.06.2018
$88.8M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
kharashka Blockchain ...
Coinbase bilawday Cr ...
irish ayaa sheegay in: